Tree Myanmar, Author at Tree Myanmar
Home / View all posts by Tree Myanmar
Jeff Bezos လို့ခေါ်တဲ့ သာမန်လူတစ်ဦးဟာ Amazon ဆိုတဲ့ E-commerce website ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးဘီလျံနာ သူဌေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ E-commerce website ဆိုတာ ၀င်ငွေများစွာရရှိဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုံးစွဲသူတွေအဆင်ပြေစေမယ့် website တစ်ခုက ကြီးမာကျယ်ပြန့်တဲ့ လက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခုနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ E-commerce website ဖန်တီးရာမှာ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အမှားတချို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ e-commerce website ပေါ်မှာ product တစ်ခုကို ပြသတဲ့အခါ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က user တွေကို ၀ယ်ချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို၀ယ်ချင်လာအောင်လုပ်ဖို့က သင့်ရဲ့ပြိုင်ဖက်တွေဆီက ၀ယ်မယ့်အစား ဘာကြောင့်သင့်ဆီက ၀ယ်သင့်လဲဆိုတာ သူတို့သိဖို့လိုပါတယ်။ product ချင်းတူနေရင် သင့်ဆီက စျေးပိုသက်သာလို့လား?...
August 18th, 2021 06:48 am November 30, 2019
သင့်ရဲ့ Website ကို Launch လုပ်လိုက်ပြီးနောက် လုပ်စရာ အချက်လေးတွေ ကျန်နေပါသေးတယ်။ ထိုအချက်လေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ သိသလောက်လေး ပြောပြပါမယ်။ 1. Page Tile တွေ နဲ့ SEO description တွေ မှန်မမှန်စစ်ပါ။ စာမျက်နှာတိုင်းမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Featured Image တွေ လည်း ရှိသင့်ပါတယ်။ Featured Image က သက်ဆိုင်ရာ စာမျက်နှာပါ Title နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပုံတွေ ရွေးသုံးပေးဖို့သင့်ပါတယ်။ 2. Sitemap.xml File နဲ့aRobots.txt File ဖန်တီးပါ။ Sitemap ဆိုတာက Website အတွင်းမှာပါ၀င်တဲ့ URLs အားလုံးရဲ့ List ြဖစ်ပါတယ်။ Sitemap...
August 18th, 2021 06:46 am November 16, 2019
Photoshop ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ Graphic Designers တွေအတွက် အဓိကအသုံးပြုနေရတဲ့ software တစ်ခုဆိုတာ ပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။ Software မှာပါ၀င်တဲ့ Feature တွေအနေနဲ့တေ့ာ Sketch ထက် Photoshop က ပိုများတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါဆိုဘာလို့ Sketch နဲ့ နှိုင်းယှဥ်ဖို့လိုတာလဲ။ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ သူ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်လေးတွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အောက်ပါအခြေခံအချက်လေးတွေကို တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။ 1. Time Photoshop ကို လွန်ခဲ့သည့် 31 နှစ် (1988) ခုနှစ်မှာ Thomas နဲ့ John Knoll တို့က တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Sketch ကိုတော့ လွန်ခဲ့သည့်9နှစ် (2010) ခုနှစ်မှာ Software Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bohemian...
August 18th, 2021 06:43 am November 10, 2019
Website တစ်ခုမှာ design, layout, contents တွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်တောင်မှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ဖို့ လမ်းတစ်၀က်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။ သင့် website ကို Launch မလုပ်ခင် မှာ ဘာတွေစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်နေသေးတာလဲဆိုတာ အောက်ပါအခြေခံအချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ Contents စာလုံးပေါင်းတွေမှန်ကန်မှုရှိရဲ့လား၊ list style လို စာတွေမှာ bullet တွေပါရဲ့လား၊ company contact info တွေ (address, phone no, email, etc) တွေမှန်ရဲ့လား၊ title မှာ Favicon ပါပြီလား စစ်ပေးရပါမယ်။ ၂။ Form Contact Form ဆိုတာ user နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးမယ့် ပေါင်းကူးတံတားလေးပါပဲ။ form ကနေတဆင့်...
August 18th, 2021 06:40 am November 3, 2019
WordPress Website တစ်ခုအတွက် မရှိမဖြစ် Plugin (5) မျိုး WordPress နဲ့ Website တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် plugin တွေက မပါမဖြစ်ပါပဲ။ ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ theme ထဲမှာ built-in plugin တွေ ပါပြီးသားပေမယ့် တချို့ function တွေအတွက် custom plugin တွေကို ယူသုံးနေရတုန်းပါပဲ။ WordPress အတွက် လက်ရှိထွက်ရှိထားတဲ့ plugin ပေါင်း 54,000+ လောက်ရှိနေပါတယ်။ Beginner တွေအတွက်တော့ ဒီလောက်များတဲ့အရေအတွက်ထဲမှာမှ မိမိလိုအပ်ချက်နဲ့တကယ်ကိုက်ညီတဲ့ plugin တွေ ယူသုံးဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ‌ယေဘုယျအနေနဲ့ wordpress website တစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် အခြေခံအားဖြင့် ပါ၀င်ရမယ့် plugin များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ Page Builder...